ललितपुर, चैत ३ । ललितपुर महानगरपालिकाले सडक सञ्जाल तथा मेट्रिक प्रणालीमा आधारित घर नम्बर वितरण गर्र्ने भएको छ । दोस्रो नगरसभाबाट पारित निर्णय अनुरुप महानगरपालिकाले सडक सञ्जाल तथा मेट्रिक ठेगाना प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।
Read more about ललितपुर महानगरद्वारा सडक सञ्जालमा आधारित घर नम्बर लागू गर्दै
Read more about ललितपुरको तीन वटा विद्यालयमा रोबोटबाट पढाइ सुरु
ललितपुर । पाँच वटा महत्वपूर्ण विद्येयकहरु पारित गर्दै ललितपुर महानगरपालिकालको तेस्रो नगरसभा सम्पन्न भएको छ। बुधबार सम्पन्न नगरसभाबाट विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न वनेको विद्येयक २०७५, ललितपुर महनगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विद्येयक २०७५, फोहरमैला व्यवस्थापन विद्येयक २०७५, न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्वन्धि) व्यवस्था गर्न वनेको विद्येयक २०७५ र सहकारी विद्येयक २०७५ पारित भएको हो ।
Read more about ललितपुर महानगरको तेस्रो नगरसभा सम्पन्न, पाँच वटा ऐन पारित
मेयर फोरमको दोस्रो बैठक सम्पन्न, तेस्रो बैठक किर्तिपुरमा हुने
ललितपुर÷२८ फागुन, काठमाण्डौ र काभ्रे उपत्यकाका ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणका बारेमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको दोस्रो मेयर्स फोरमको बैठकले अर्को बैठक किर्तिपुर नगरपालिकामा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Read more about मेयर फोरमको दोस्रो बैठक सम्पन्न, तेस्रो बैठक किर्तिपुरमा हुने
ललितपुर महानगरको आँगनमा एटीएम पँधेरो ! मन्त्री मगर र उपमेयरद्धारा वटुवालाई पानी
ललितपुर , २१ फागुन । ललितपुर महानगरपालिकाको ढोकैमा ‘वाटर एटीएम’ पानी पँधेरो सञ्चालनमा आएको छ। नेपालमै पहिलो पटक ‘वाटर एटीएम’ पानी पँधेरो सञ्चालनमा आएको हो । मंगलबार खानेपानी मन्त्री बिना मगरद्धारा उद्घाटन भएको यो ‘वाटर एटीएम’ बाट २ रुपैयाँमा एक गिलास पानी पिउन पाइन्छ।
Read more about ललितपुर महानगरको आँगनमा एटीएम पँधेरो ! मन्त्री मगर र उपमेयरद्धारा वटुवालाई पानी
पाटनको कला देखेर अष्ट्रियाकी विदेशमन्त्री कारिन प्रभावित
नेपालको तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा आएकी अष्ट्रियाकी विदेशमन्त्री कारिन क्नायसल्ले बिहीबार ललितपुरको पाटन दरबार संग्राहलयको अवलोकन गरेकी छिन् ।
उनले ललितपुर अत्यन्तै सुन्दर सहर भएको बताउँदै यसले आफू प्रभावित भएको बताइन् । अर्को पटक नेपाल आउँदा ललितपुर आउन नछुटाउने उनले बचन दिइन् । अवलोकनका क्रममा उनले सुन्दरीचोक, मूलचोक, केशवनारायणचोक , ट्रेजर पोखरी लगायत पाटन दरबार स्क्वायर क्षेत्रको अवलोकन गरेकी थिइन् । धातुकला , काष्ठकलाको उनले रुचिपूर्वक जानकारी लिएकी थिइन् ।
Read more about पाटनको कला देखेर अष्ट्रियाकी विदेशमन्त्री कारिन प्रभावित